Tilmaamaha Safarka ee Abu Dhabi Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Abu Dhabi waa caasimadda federaalka iyo Xarunta dowladda ee Imaaraadka Carabta, waana magaalada ugu weyn ee Emirate -ka Abu Dhabi waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu qaab dhismeedka wanaagsan dunida.
Ciyaaraha Olombikada Gaarka ah ee Ciyaaraha Adduunka ee Xagaaga, oo ah dhacdooyin isboorti oo badan oo loogu talagalay cayaartoyda naafada ah ee garaadka, ayaa ka dhacaya Abu Dhabi, laga bilaabo 14 - 21 Maarso 2019.
Iyada oo ay ku nool yihiin dad ka yar 1.5 milyan, Abu Dhabi waa xarunta ugu weyn ee shirkadaha saliidda iyo safaaradaha. Kaliya 420,000 oo muwaadiniin Imaaraad ah oo ku nool imaaraadka oo dhan, mid kasta wuxuu leeyahay celcelis ahaan celcelis ahaan qiimihiisu yahay US $ 17 milyan (64M dirham). Magaalada waxaa ku yaal jardiinooyin waaweyn iyo jardiinooyin, boulevards cagaaran oo saf ah dhammaan waddooyinka iyo waddooyinka, dhismayaal dhaadheer oo casri ah, silsilado hudheello caalami ah oo raaxo leh iyo suuqyo ganacsi oo aad u sarreeya.
Muddo dheer ayaa loo arkaayay xafiis dowladeed oo adag oo gebi ahaanba ka maqan pizzazz-ka deriska la ah ee Dubai, arrimuhu waxay bilaabeen inay si aad ah isbeddelaan 2004 ka dib markii muddo dheer uu xukumayay Sheikh Zayed oo wiilkiisa Sheikh Khalifa uu la wareegay. Si loo soo jiito dalxiiska iyo maalgashiga, iibinta dhulalka ee shisheeyaha waa la oggolaaday oo xaddiditaannada khamriga ayaa la dabciyey. Tan iyo dib-u-habeyntii, Abu Dhabi wuxuu tan iyo markii uu ku soo koray mid ka mid ah magaalooyinka ugu horreeya Gacanka, isagoo la tartamaya Dubai iyo Doha. Sida Dubai iyo Doha, shisheeyaha ayaa aad uga tiro badan Emiratis-ka Abu Dhabi. Sidaasoo kale, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in Carabigu yahay afka rasmiga ah, haddana Ingiriisigu waa kan de facto lingua franca, iyo inta badan Emiratis ayaa ku hadli doona si ay ula xiriiraan shaqaalaha soo galootiga ah ee u shaqeeya iyaga.
Khaniisnimada ayaa sharci darro ka ah guud ahaan Isutagga Imaaraatka Carabta iyadoo laga yaabo inay ciqaab ka dhasho masaafurin, ganaaxyo, waqti xabsi, ama xukun dil ah.
Dhowr ballaaran sidoo kale mashaariic ayaa socota. Jasiiradda Yas waxay martigelisaa Abu Dhabi 'Formula 1 track, Ferrari World theme park iyo Warner Bros. World Abu Dhabi, halka aagga soo socda ee US $ 28 bilyan ee Saadiyat Island ay socoto horumar. Xarumaheeda dhexe waa matxafka Louvre, oo la furay bishii Nofeembar 2017, iyo matxafka Guggenheim.
"Dhabi" waa eray Carabi ah oo loogu talagalay nooc ka mid ah noocyada gowraca ee cawsha oo berigii hore caan ka ahaa gobolka Carabta. “Abu” waxaa loola jeedaa aabe; sidaa darteed, Abu Dhabi macnaheedu waa "Aabaha Dhabi".
Magaalada waxay leedahay cimilo oomane ah, oo leh kuleyl aad u kulul xagaaga. Roobabka sanadlaha ah waxay gaarayaan 57 milimitir (2.2 inji).
Inta badan Abu Dhabi waxay ku taal jasiirad qaab eg oo isku xidha laba buundo oo u jirta dhulweynaha.
Cinwaanada jidadka ee Abu Dhabi isku mar waa kuwo caqli gal ah oo aan rajo beel ahayn. Wadooyin badan ayaa leh magacyo dhaqameed, sida "Wadada Madaarka", oo laga yaabo inaysan u dhigmin magacyada rasmiga ah, sida "Maktoum St", magaaladuna waxay u qaybsan tahay degmooyin dhaqameed sida "Khalidiyya". Si kastaba ha noqotee, wareegtadii ugu dambaysay, magaalada waxaa loo kala qaybiyey "aagag" iyo "qaybo" lambarro leh, iyada oo dhammaan waddooyinka waax kasta loo tiriyey, Koowaad, St labaad, iwm. . Nidaamka jidadka ugu waaweyni waa mid toos u socda marka aad ogaato in jidadka tirada yar ee nambarrada ahi ku socdaan jasiiradda dhexdeeda oo xitaa lambarradu ay ku socdaan. Markaa First St runti waa Corniche, lambarrada aan caadiga ahaynna waxay ka sii soconayaan magaalada illaa 31st St oo u dhow beerta cusub ee Khalifa Park. Wadada Gagada Diyaaraduhu waa Second Second iyo xitaa lambarradu waxay u sii socdaan bariga illaa iyo 10-aad ee Abu Dhabi Mall Dhinaca galbeed ee Wadada Madaarka, tirooyinku waxay ka kala socdaan 22nd Street ilaa 32nd St oo ay marayaan Bateem Marina cusub. Hoog, jahwareer waxaa sababa jidadka maxalliga ah, oo ku dul yaal calaamadaha cagaaran (waddooyinka waaweyn ayaa ku yaal calaamadaha buluugga ah) waxaana sidoo kale loogu yeeraa Koowaad, Labaad, iwm. Inta badan dadka deegaanka ayaa doorta inay iska indhatiraan nidaamka gebi ahaanba, habka ugu wanaagsan ee tilmaamaha loo bixiyona waa sidaas maraya astaamaha, haddii aad tagsi qaadato, qallafsanaantaadu waxay tahay inaad "ka dambeyso Hilton Baynunah" aad uga dheereyso "Fifth Street, Sector 2".
Safarka Abu Dhabi
Safar diyaarad ku tag Abu Dhabi
Garoonka Diyaaradaha Abu Dhabi. Madaarka labaad ee ugu mashquulka badan Imaaraadku (kadib Dubai) iyo saldhiga guriga Abu Dhabi calanka u sido Etihad Airways. Diyaaradda Etihad Airways ayaa si xawli ah ku sii fideysay waxayna hadda ka duushaa meelo badan oo ka tirsan Australia ilaa Yurub iyo Mareykanka.
Gegada diyaaradaha waxaa loo kala saaray Terminal 1 (Terminal-kii asalka ahaa), Terminal 3 (Terminal cusub oo inta badan loogu talagay Etihad Airways), iyo Terminal 2 yar.
Terminal 1 wuxuu bixiyaa muuqaal yar oo jilicsan iyo si quruxsan oo yaab leh buluug-lime ah dusha sare ee boqoshaada oo kaa sugaya irdaha.
Terminal 2 ma laha aeroaragyada, ayada oo ku tiirsan basaska rakaabka u qaadaya kana duulaya diyaaradahooda.
Terminal 3 aad ayuu uga cusub yahay oo wuxuu horumariyay ka adeegashada iyo marinka iridda. Dhammaan duullimaadyada ka yimaada terminal 3 waa Etihad, laakiin dhammaan duulimaadyada Etihad ma ka baxaan Terminal 3. Gaar ahaan duulimaadyada taga ama ka yimaada Mareykanka waxay isticmaalaan xaruntii hore.
Terminalka afraad ee weyn ayaa la filayaa inuu furmo 2019.
Ka-soo-noqoshada garoonka diyaaradaha:
Tagaasida Al Ghazal waxay u safraan magaalada qiimo jaban oo ah 75 dirham waxayna qaataan qiyaastii 40 daqiiqo.
Tagaasida mitirka ah ayaa hadda loo oggol yahay inay ka soo qaadaan rakaabka garoonka diyaaradaha. Safar lagu tagayo bartamaha magaalada Abu Dhabi wuxuu ku kacayaa 60-70 dirham. Tagaasida mitirku waxay sidoo kale keeni kartaa rakaabka garoonka diyaaradaha. Meesha tagaasida laga raaco waxay ku taal dhamaadka socod lugta dheer ah oo laga soo qaado terminaalka weyn. Rakaabku waa inay bidix u leexdaan markay ka tagayaan aaga ay imanayaan oo ay marayaan waddo dheer oo marinka aagga jidka laga maro ah, halkaas oo laga helo sagxad daboolan oo ku ag taal istaagga taksiga. Filo safaf dhaadheer barta tagaasida fiidkii iyo saacadaha dambe ee habeenkii.
Jidka basaska dadweynaha ee A1 sidoo kale wuxuu aadaa magaalada 30–45 daqiiqadood 24 saacadood maalintii, wuxuuna ku kacayaa 3 dirham. Tani waxay ka baxeysaa banaanka T3: Aad heerka hoose oo ku arag basaska Etihad midig hortaada. 10 mitir oo midigta ku taal waa calaamad oranaysa "Bus Stop". Baska Etihad iyo baska dadweynaha waxay wada isticmaalaan basas isku mid ah, baska dadweynaha wuxuu kaliya u istaagi doonaa sida kan ugu horeeya ee safka. Ka digtoonow, in macluumaadka garoonka ay dhihi karaan ma jiro bas dadweyne, iyo inaad taksi raacdo. Baska wuxuu ka tagi jiray heerka sare laakiin taraafikada awgood waxaa loo badalay heerka hoose. Terminus-ka magaalada waa boosteejada basaska ee Al Ittihad Square, oo ku xigta Safaaradda Ingiriiska.
Haddii aad ku duuleyso Etihad ama qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadyada wadaagga ah, basaska qaaska ah ee bilaashka ah ayaa la siiyaa xilliyada caadiga ah ee Dubai iyo Al Ain (waa inaad ku sii ballansataa ugu yaraan 24 saacadood ka hor boggan) Kuwaani waxay ka ambabaxayaan goobta baabuurta la dhigto ee ku taal wejiga hore ee garoonka diyaaradaha, xafiisyada kirada gawaarida: raac calaamadaha Etihad Shuttle. Dubai gudaheeda, waxaad sidoo kale ka hubin kartaa Xarunta Safarka ee Etihad, oo u dhow saldhigga Bangiga Noor.
Rakaabka Ethiad ee ugu horeeya iyo rakaabka ganacsiga waxay ka faa'iideysan karaan adeegga shaambada ee Mercedes iyada oo loo eegayo xaalado la mid ah sida baska u soo diraya xiriiriyahan ama meel kasta oo ka tirsan UAE.
Garoonka Dubai International
Beddelka wax ku oolka ahi waa inuu u duulo Madaarka Caalamiga ah ee Dubai () ee ku yaal imaaraadka deriska ah kuna sii socdo bas ama taksi.
Gegada diyaaradaha Dubai:
Taksiga garoonka diyaaradaha ee Dubai oo toos ugu socda Xarunta Magaalada Abu Dhabi ayaa ku kici doonta ilaa 300 dirham.
Si aad bas u hesho, waa inaad aadaa mid ka mid ah dhowr saldhigyo bas oo ku yaal Dubai si aad ugu qabato Emirates Express ilaa Abu Dhabi. Hoos ka eeg qeybta baska.
Wadada weyn ee loo yaqaan E11 ee isku xidha Dubai iyo Abu Dhabi oo leh shan haad waa wadada ugu safarka badan dalka, safarka 130-km waxaa lagu dabooli karaa qiyaastii 1 saac iyo 20 daqiiqo. In kasta oo uu jiro xaddid xawaare qaran oo ah 120 km / saacaddii, waad xawaareyn kartaa illaa 140 km / saacaddii adigoon kicin kaamirooyinka xawaaraha ku socda. Xawaarahaan waxaa si xad dhaaf ah u dhaafay darawalada qaar. Ka joog haadka bidix ee bidix oo si taxaddar leh u kaxee baabuur, badanaa habeenkii.
Haddii aad gaari ka kireysato Abu Dhabi, fursadaha ayaa ah inuu gaariga kuu digi doono haddii uu ka sarreeyo 120 km / saacaddii. Waxay kuxirantahay gaariga, waxay kaliya noqon kartaa nal biligleynaya ama la socda, si joogto ah, qaylada dhawaaqaya. Haddii aad taas ka xanaajiso, waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad dhaafto 120 km / saacaddii.
Si toos ah ugu safridda Abu Dhabi oo ka timaadda Dubai E11, bidixda bidix u hayso Al Shahama oo raac waddada weyn ee E10, oo ka gudubta Jasiiradda Yas (ka bixitaanka waddada weyn ee E12) iyo Al Raha Beach ee loo maro Buundada Sheikh Zayed ee Abu Dhabi . Buundadan waxay si toos ah ugu xirmaysaa Salam Street (8th Street), oo ah waddo weyn oo weyn oo ku teedsan xeebta waqooyiga ee Jasiiradda Abu Dhabi. Beddel ahaan Buundada Zayed, waxaa jira jidad ka baxa E10 oo ku xira Maqta Bridge, oo aada wadada 2aad (Wadada Madaarka) iyo Wadada 4aad (Wadada Bariga ama Wadada Muroor). Inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa, jidadkani waxay si dhakhso leh magaalada ugu soo galaan.
Baarkinka magaalada dhexdeeda waxaa kormeera Mawaqif, oo sidoo kale bixisa mitirrada baarkinka. Mitirrada gawaarida la dhigto waxay leeyihiin bandhigyo ku qoran Ingiriis iyo Carabi. Lacagta ugu yar ayaa badanaa ah 2-4 dirham.
Meelaha gawaarida la dhigto ee Abu Dhabi ayaa si cad loo calaamadeeyay; huruud iyo cawl oo aan la dhigin, buluug iyo madow qiimaha caadiga ah, iyo buluug iyo cadaan qiimo jaban.
Aagga dhexe, waxaa ku yaal garaashyo dhigasho oo kooban (qaarkood waxay ku yaalliin suuqyo ay ka mid yihiin Khaalidiya oo guud ahaan lacag la'aan ah).
Waxaad ka geli kartaa Abu Dhabi imaaraadka kale ee Dubai, Sharjah, iwm. Bas ahaan. Ku Emirates Express inta udhaxeysa Abu Dhabi iyo Dubai waxaa si wada jir ah u wada shaqeeya dowladaha Abu Dhabi iyo Dubai. Wadada 130-km waxay qaadataa qiyaastii laba saac. Basaska ay ka shaqeeyaan Dubai RTA waa basas qaali ah oo ka qaada 25 dirham safarka ay ku tagayaan Abu Dhabi iyo 25 dirham safarka soo noqoshada. Basaska gaadiidka ee Abu Dhabi waxay qaadaan 15 dirham wado kasta. Baska ugu horeeya wuxuu ka ambabaxayaa garoonka basaska weyn ee Abu Dhabi ee geeska Hazza bin Zayed First (11th) St iyo East (4th) Wadada 05:30 iyo caleemaha ugu dambeeya 23:30; waxay baxayaan 30 daqiiqo oo kala-goyn ah, ama haddii basku dhaqso u buuxsamo. Laga soo bilaabo Dubai, basasku waxay ka baxaan 05:30, waxayna socdaan illaa 23:30, iyagoo ka tagaya xarunta Al Ghubaiba ee ku taal Bur Dubai (oo ka soo horjeedka Carrefour Shopping). Waqtiyada basaska, fiiri jadwalka lagu daabacay bogga Dowladda Dubai.
Haddii aad haysato tigidh duulimaad oo Imaaraad ah oo aad timaaddo ama ka dhoofayso garoonka diyaaradaha ee Dubai, shirkaddu waxay ku siineysaa kordhin ballaadhan safarkaaga Abu Dhabi. Basasku waxay ka baxaan garoonka diyaaradaha Dubai Terminal 3 waxayna yimaadaan xafiiska Emirates Abu Dhabi oo ku yaal Al Sawari Tower. La xiriir adeegga macaamiisha Emirates ee ballansashada.
Waad calan ka dhigan kartaa taksi kasta oo mitir ah oo ku yaal wadada Dubai ama meel kale oo ka mid ah UAE oo aad weydiisan kartaa inaad tagto Abu Dhabi. Qiimaha u dhexeeya Dubai iyo Abu Dhabi waa ilaa 250 dirham. Laga soo bilaabo Abu Dhabi, tagaasida waxay ku baxday qiyaastii 200 dirham ilaa Dubai.
Ku wareegida Abu Dhabi
Abu Dhabi wax badan kama helin xagga gaadiidka dadweynaha; waxaa jiri doona saxmad badan oo taraafikada ah.
Tagaasida waa hab wanaagsan oo aad ku dhex wareegto hadaadan baabuur lahayn. Tagaasida Abu Dhabi waa kuwo jaban. Tagaasida ugu waaweyn waa qalin oo ay ku qoran yihiin calaamado jaalle ah dusha sare. Calanka dayrta ayaa ku kacaya 5 dirham, 5.50 dirham habeenki (22:00 ilaa 06:00) (2017). Waxaad ka calaamadeysan kartaa midkood meel kasta oo Abu Dhabi ah. Haddii kale, waxaad ka ballansan kartaa tagsi Abu Dhabi adoo wacaya 600535353, oo ah khidmadda diiwaangelinta 4-dirham ah. Taksi ayaa kaa qaadi doona 1.82 dirham halkii kiilomitir (2.93 dirham halkii mayl), iyo 50 fils daqiiqad kasta oo sugitaan ah.
Tagaasida waxaa lala socdaa isticmaalka GPS loomana oggola inay xawaareyo ka sarreeya ka bixiyaan. Isbeddelladani waxay kuxiran yihiin meesha taksigu ku yaal.
Gawaarida madow ee cusub ayaa sidoo kale mararka qaarkood ku wareega magaalada. Kuwani waa tagaasida garoonka, oo aad ka degi karto garoonka diyaaradaha Abu Dhabi oo aad uga degi karto meel kasta oo magaalada ah 60-100 dirham. Waad ku aqoonsan kartaa iyaga oo wata calaamadaha midabbada leh dusha sare, iyaga oo soo bandhigaya qoraal ku qoran Ingiriis iyo Carabi.
Lagaagama filayo inaad u sheegto darawallada tagaasida, laakiin mahadnaq aad ayaa loo qadarin doonaa.
Saldhigga weyn ee basaska ee Abu Dhabi wuxuu ku yaal Hazaa Bin Zayed Road. Waxaad ka heli kartaa basas halkaan tagaya meelaha kala duwan ee magaalada gudaheeda ah iyo sidoo kale basaska magaalada-dhexdeeda ah. Istaagga basku wuxuu sidoo kale u adeegaa sidii taksi istaageed, tagaasida isku xidha imaaraadka. Basaska magaalada-dhexdeeda iyo basaska garoonka diyaaradaha way fududahay in laga helo boosteejada basaska, oo si wanaagsan ayaa loo muujiyey. Adeegyada marinku waxay ka baxaan meelo kala duwan oo istaagga u dhow, dhammaantoodna ma galaan xarunta baska. Ma jiro calaamado tilmaam ama iyo khariidado toona.
Nidaamka qiimaha ayaa fudud: 2 dirham oo hal raacid ah, 4 dirham maalin pass, 30 dirham toddobaad qaadasho, ama 40 dirham hal bil ah Xaffilat dhaaf. Tigidhada waxaa lagu buuxin karaa oo keliya kaararka casriga ee la iska tuuri karo ama dib loo isticmaali karo. Ma jiraan wax lacag ah oo ay qaataan wadayaasha baabuurta. Basaska cagaaran ee buluugga ah waa kuwo hawo leh laakiin aan lagu heli karin kursiga curyaamiinta. Rakaabku way raaci karaan oo fadhiisan karaan joogsiyada loogu talagalay wadada. Goobahaan waxaa lagu aqoonsan karaa tiirarka joogsiga basaska ee Waaxda Gaadiidka ee ku meelgaarka ah. Ka taxaddar: joogsiyada basaska ee aan lahayn calaamadda joogsiga baska ee 'DoT' waxaa laga yaabaa in aan loo adeegin maaddaama aan la isticmaalin dhammaan joogsiyada basaska ee wadada.
Kaararka casriga ee Hafilat waxaa laga iibsan karaa mashiinada tigidhada oo laga heli karo saldhiga weyn ee basaska iyo aagga Abu Dhabi Mall. Mashiinnada waa kuwo aan la aqbali karin oo ay adag tahay in la ogaado, sidaas darteed weydii dadka deegaanka.
Marinka 5: Al Meena ilaa Marina Mall oo loo maro Abu Dhabi Mall iyo Hamden Street. 10kii daqiiqaba, 06: 30–23: 30.
Marinka 7: Abu Dhabi Mall ilaa Marina Mall oo loo maro Zayed Wadada 1aad (sidoo kale loo yaqaan Electra). 10kii daqiiqaba, 06: 30–23: 30.
Marinka 8: Naadiga dalxiiska ee Break Water iyada oo loo maro Hamdan Street, Zayed the 2nd (via 4th) Street, Airport Road, Al Manhal Street. 20 daqiiqo kasta, 07: 15–23: 30.
Marinka 32: Isboortiga Magaalada Carrefour ilaa Marina Mall oo loo maro Wadada Madaarka, Saldhigga Basaska, iyo Zayed Wadada 1aad. 10 daqiiqo kasta, 06: 00-22: 40.
Marinka 54: Isboortiga Magaalada Carrefour ilaa Abu Dhabi Mall oo loo maro Bariga Akhriska, Istaanka Basaska, iyo Wadada Hamden. 10 daqiiqo kasta, 06: 00-23: 00.
Adeegga basaska ee gaboobay, oo ay maamusho Dowladda Hoose ee Abu Dhabi, wuxuu ka shaqeeyaa waddooyinka basaska ee magaalada dhexdeeda iyo imaaradaha kale. Wadooyinka magaalada gudaheeda aad ayey u yaryihiin. Basasku waa casri oo hawo leh. Adeegyadu waa sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah waxayna shaqeeyaan wax yar ama ka yar saacad kasta waxayna ka qaadaan 2 dirham safarka caasimada dhexdeeda. Kuraasta yar ee hore waxaa loo qoondeeyay dumarka, ragga waa inay u dhaqaaqaan dhanka dambe ee baska.
Ku safri gaari Abu Dhabi
Abu Dhabi wuxuu caan ku yahay darawallo taxaddar la’aan ah. Waxay ku soo bixi karaan hortaada, waxay ku beddeli karaan haadka si aan kala sooc lahayn, iyo inay farriimo u diraan inta ay wadaan waa caadi. Dhanka kale, mamnuucida wadista gawaarida sakhraanka ah waa mid si adag loo dhaqan galiyay; hal koob oo khamri ah ayaa kugu filan inuu kugu xidho xabsi muddo bil ah.
Haddii aad go'aansato inaad quusto, iska ilaali in nidaamka lambarrada waddooyinku ay yihiin wax aan caadi ahayn oo ay toddobaadyo ku qaadan karto la qabsiga. U leexashada waxaa loo oggol yahay isgoys kasta. Marka calaamada haadka bidix cagaar noqoto, waa inaad rogrogmadaa oo aad soo noqotaa. Wax kastoo cilladaha kale ee darawallada halkan ku jira ay yeelan karaan, way sameeyaan ma socodsiiya nalalka cas. Waxaa jira kaamarooyin isgoysyo badan, ganaaxyadu waa badan yihiin (qiyaastii 550 dirham), dadka deegaanka ah ee aan ahayn muwaadiniinta waa la masaafurin karaa iyagoo ordaya laydhadh casaan badan. Markuu iftiinku bilig bilig yeesho, taksigaas hortaada ah doono macaanka bareegyada, waana inaad sidoo kale. Markuu iftiinka cagaar noqdo, si kastaba ha noqotee, ka filo qof gadaashiisa inuu kugu garaaco isla markiiba si uu kuugu dhaqaaqo.
In kasta oo ay jiraan wadooyin aad u wanaagsan, iyo nidaamka calaamadaha taraafikada, shilalka gawaarida ayaa wali ah sababta ugu weyn ee dhimashada ee Imaaraadka.
In kasta oo lagu lugeeyo Abu Dhabi aysan dhibaato ku ahayn dadka deegaanka, dalxiisayaasha ka yimaada cimilada qabow waxay la dhibtoodaan kuleylka iyo qorraxda. Heerkulku wuu ka badnaan karaa 45 ° C xagaaga.
Intaad ku dhex jirto ama isticmaasho gaari waa fikrad wanaagsan, haddii ay tahay inaad lugeyso, isku day inaad sameyso habeen, markay qabow tahay. Waxaa intaa sii dheer, ma jiri doono qorrax ku siinaysa qoraxdu. Haddii ay tahay inaad tagto inta lagu jiro maalinta, xiro waxyaabo badan oo loo yaqaan 'SPF 50 sunblock', xiro koofiyad iyo dhar khafiif ah iskuna day inaad hadhka ku hayso inta ugu badan ee suurtogalka ah.
Waxaa jira waddo kala-go'an oo socotaa ku dhowaad dhammaan dhererka Corniche, iyo sidoo kale hareeraha Jasiiradda Yas, iyo qaybo kale.
Abu Dhabi wax yar ayey ku bixisaa aragtida taariikheed ama dhaqameed laakiin xaqiiqdii kama maqna soo jiidashada qaar badan oo ka mid ahna waa bilaash.
Sheikh Zayed Masaajidka (مسجد الشيخ زايد الكبير), Shaikh Labaad Rashiid Bin Saciid,. Sa – Th 09: 00–22: 00. Masjidka 8-aad ee ugu weyn adduunka, wuxuu ku faanaa wadar ahaan 82 domes. Jimcaha, waxay u xiran tahay dadweynaha oo waxaa loo furay oo keliya cibaadeystayaasha. Waxaad ku imaan kartaa baska dadweynaha # 54. Hubso inaad weydiiso darawalka baska inuu kuu sheego marka aad halkaa gaarto. Joogsiga basaska dadweynaha waa 100 m ka hor masaajidka iyo wixii ka dambeeya ma joogsan doono 5-ta km ee soo socota. Xarunta Masaajidka waxay bixisaa dhowr safar oo lacag la’aan ah masaajidka maalin kasta. Waqtiyadu way kala duwan yihiin maalin kasta, markaa ka hubi boggooda internetka. Maaddaama ay tahay meel loogu talagalay cibaadeystayaasha, u labistaan ​​si hufan. Gaar ahaan, haweenku waa inay daboolaan madaxa iyo anqawyada (haddii ay xiran yihiin kabo). Labis madoow oo ku habboon ayaa laga heli karaa masaajidka. Waad ka fogaan doontaa safka dharka haddii aad xirato kabo, dhar dhaadheer ama surwaal, oo aad qaadatid shaar si aad u daboosho madaxaaga / timahaaga. Dharka ayaa sidoo kale loo heli karaa ragga, laakiin waxay u badan tahay inaan loo baahnayn. Xitaa marka ay sawirro ka qaadayaan banaanka masjidka, haweenka sida aan habooneyn u labisan waxaa caqabad ku noqon doona amniga. free. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qasr al-Xusn (قصر الحصن). Dhismihii ugu da'da weynaa ee Abu Dhabi, qalcadan yar waxaa markii ugu horeysay la dhisay 1761 waxayna u adeegtay sidii qasriga boqornimada dabayaaqadii qarnigii 18aad ilaa 1966. Goobta waxaa ku wareegsan looxyo, dhismaha laftiisana uma furan dadweynaha.
Wadada Corniche. Wadada weyn ee magaalada, waxay ku wareegsan tahay hareeraha xeebta oo ay weheliso Abu Dhabi xeebteeda cajiibka ah ee u fidisa masaafo dhan maylalka biya-dhaca oo u dhow Marina Shopping Mall ku dhowaad illaa dekedda Mina Zayed. Xeebta xeebteeda waxaa lagu rakibay marin dhan oo dherer ah, dhismayaal dhaadheer, xeebo qurxoon, jardiinooyin, iyo aagag kale oo muuqaal leh. Waxaa jira howlo badan sida fuulitaanka go-kart, garoomada ciyaarta iyo xitaa marxalado bandhigyo ah. Kaalay fiidkii waxaadna dareemi doontaa sidii dhammaan Abu Dhabi ay halkan u yimaadeen socod socodkooda fiidkii.
Jasiiradda Jasiiradda. Waxay leedahay wadada tartanka Formula 1, Ferrari World (Ferrari-themed park home to the the roller coaster coaster in the world), Yas Waterworld, suuq laga dukaameysto iyo hudheel. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Calan-furan. Markay tahay 123 m, tani waxay ka mid tahay calamada calamka ugu dhaadheer, mana seegi doontid calanka weyn ee Imaaraadku ka duulayo. Waxay ku taal Jasiiradda Marina oo ka soo horjeedda Marina Mall. (cusbooneysiiyay Dec 2015)
Louvre Abu Dhabi (Matxafka Louvre), Degmada Dhaqanka ee Sacdiyat, Jasiiradda Sacdiyat,. Sa Su Tu W 10: 00–20: 00, Th F 10: 00–22: 00, wuxuu xirmay Isniinta. Matxafka farshaxanka iyo xadaaradda ayaa soo bandhigaya farshaxanno laga soo Matxafka Louvre iyo ururo kale oo Faransiis ah. Waxaa la furay bishii Nofeembar 2017, matxafka ugu weyn ee farshaxanka gacanka Carabta oo leh 24,000 mitir murabac ah (260,000 sq ft), oo ay ku jiraan 8,000 mitir murabac ah (86,000 sq ft) galleries. 60 dirham / qof. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Abu Dhabi waxay leedahay dhowr goobood oo waaweyn oo cagaar ah, inbadan oo kamid ahna waxaa kamid ah goobo lagu ciyaaro iyo qalab loogu tala galay caruurta, magaaladuna waxay kuxirantahay ilo qurxoon, meelo badan oo iftiinka neon ah, iyo farshaxan mararka qaarkood ah.
Xadiiqadda Khalifa (off Al Salam St (8aad) oo u dhaw Masjidka weyn). Beerta ugu fiican illaa hadda, oo lagu dhisay kharash dhan US $ 50 milyan. Waxay leedahay quraaradda, matxafka, tareenka, jardiinooyinka lagu ciyaaro iyo jardiinooyinka rasmiga ah.
Xarunta Dhaqanka ee Abu Dhabi. Calaamado ku yaal Emirates, waxay qabataa dhacdooyin dhaqameed iyo aqoon isweydaarsiyo sannadka oo dhan. Waxay leedahay maktabad si fiican u buuxsan, barnaamijyada carruurta, bandhigyo farshaxan, faa'iidooyin, iyo waxqabadyo kale oo la xiriira dhaqanka oo caan ku ah magaalo kasta. Waxay u qalantaa fiirin.
Manarat al Sacdiyat. Meel bandhig iyo Xarunta dhaqanka oo leh galleries, tiyaatar iyo maqaayad, la furay 2009kii iyo shaqooyin ay sameeyeen farshaxanno casri ah oo ka kala yimid daafaha dunida.
Taambuugga Imaaraadka. Xarunta bandhigga ciidda-dhiiri-gelinta ciidda ee uu naqshadeeyay Norman Foster.
Waxaa jira mashaariic aad u tiro badan oo ku soo socda Abu Dhabi.
Jasiiradaha Lulu. Kooxo jasiirado macmal ah, ayaa horeyba uga dhistay xeebta qarash aad u badan, laakiin halkaas ayay fadhiyaan iyagoo aan waxba qabanayn ka dib markii dalxiis dalxiis uu ku guuldareystay xitaa inuu bilaabo dhismaha. (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Jasiiradda Reem (jasiirad ka baxsan xeebta jasiiradda ugu weyn Abu Dhabi.). Waqtiga la dhammeeyo, waxay noqon doontaa hoy, hoy iyo waxbarasho. Jasiiradda Reem waxay si habsami leh u socotaa, iyada oo jasiirado badan laga dhisay jasiiradda si ay ugu fududaato dadkeeda sii kordhaya. Skyline Reem Island wuxuu leeyahay tiro dhismayaal dhaadheer oo aad u qurux badan, hase yeeshe waqooyiga jasiiradda wali aad bey u yartahay. Iyada oo ay taasi jirto, waxaa jira xarumo badan oo la heli karo iyo Reem Island waa meel wanaagsan oo lagu noolaado. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Maxaa laga sameeyaa Abu Dhabi
Dabaasha Ku dhowaad dhammaan hudheelada iyo naadiyada gaarka loo leeyahay ee Abu Dhabi waxay bixiyaan tas-hiilaad dabaal, inta badan qaab xeebeedyo gaar loo leeyahay. Waad bixin kartaa lacagta maalinlaha ah, ama sannad. Mid kale, oo si gaar ah uga jaban, ikhtiyaar ayaa ah Naadiga, oo ah urur ku wajahan qurba-joogta.
Lessons Huteelada qaarkood waxay kaloo bixiyaan casharo qoob ka ciyaarka, casharo jimicsi, iyo madadaalo kale oo jidheed.
Saxaraha lamadegaanka safarada waa dalxiis laakiin khibrad xiiso leh. Waa in horay loo sii qabsadaa, laakiin badanaa waa la dalban karaa sida ugu dambaysay maalintii hore, soo dhaweynta hoteelka badankood ayaa tan kuu diyaarin kara. Safarradu waxay bilaabmaan galabtii dambe waxayna dhammaadaan habeenkii. Waxaa lagaa soo ururin doonaa hudheelkaaga waxaana lagugu wadi doonaa lamadegaanka 4 in 4 gaari. Xirmooyinka badankood waxaa ka mid ah wadista lafa-jeexjeexa dusha sare, geel yar oo la raaco, makhaayad Carabi dhexdhexaad ah iyo cayaar caloosha. Qoob-ka-ciyaarka caloosha ayaa caadi ahaan lagu daraa kaliya haddii ay kugu filan yihiin kooxdaada markaa weydii waqtiga ballansashada. Ikhtiyaar kale wuxuu noqon karaa kireysiga / iibsashada 4 × 4 iyo ku biirista naadiyada 4 4 4 naadiyada ee sii kordhaya ee Imaaraadka. Kuwa ugu caansan iyaga waa Abu Dhabi 4 × 4 naadiga banaanka AKA AD4x2,000 oo bixiya khibrad waxbarasho oo bilaash ah dhammaan dadka cusub. Naadigu wuxuu ka kooban yahay dhammaan jinsiyadaha wuxuuna firfircoon yahay in ka badan XNUMX xubnood wuxuuna qorsheeyaa safarro toddobaadle ah si loo waafajiyo dhammaan heerarka xirfadaha wadista.
Isboortiga rasmiga ah ee Imaaraatka ayaa wax iibsanaya, Abu Dhabi waxay siisaa fursado badan aaggan.
Socdaalka Helicopter Diyaarso l6-kursi Eurocopter EC130 B4 iyo Discover Abu Dhabi oo ka eeg shimbiraha indhaha indhaha Adeegyada Duulista ee Falcon. Dalxiisyadu waxay shaqeeyaan maalin kasta laga bilaabo 09:00 illaa 17:00 laga bilaabo Terminalka Marina Mall. Boos celis ayaa lagugula taliyay (dalxiisyada waxaa lagu dalban karaa shaqsi ahaan ama gaar ahaaneed)
Abu Dhabi Grand Prix (Wareegtada Yas Marina ee Abu Dabhi, oo qiyaastii 30 daqiiqo u jirta caasimadda). Eeg tartanka Formula One, waana kan labaad ee Grand Prix arena ka dib Baxreyn. (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Digniinta Bros World - mid ka mid ah jardiinooyinka madadaalo ee gudaha, oo leh lix aag oo mawduucyo ah; Gotham City, Metropolis, Isgoyska Kartoonada, Bedrock, Dynamite Gulch iyo Warner Bros Plaza.
Abu Dhabi waa riyo iibsi khasab ah. Waxaa jira dhowr xarumood, badankood waxay leeyihiin dukaamo la mid ah kuwa kale. Xarumaha loogu talagalay dadka maxalliga ah ka sokow, suuqyada sidoo kale waxaa ku jira dukaamo caan ah oo ajnabi ah, iyo sidoo kale goobo naqshadeeyayaal ah. Soo-booqdayaal badan ayaa la yaabi doona muuqaalka muuqaalka dumarka - halka caadooyinka maxalliga ah ay ugu baaqayaan haweenka in lagu daboolo dadweynaha, dukaamada badankood waxay iibiyaan goonno gaagaaban iyo dusha sare oo ay weheliyaan marada dhaadheer ee dhererkoodu badan yahay iyo shaatiyada qoorta sare
Abu Dhabi Mall (gudaha Naadiga Dalxiiska, oo ku dhagan Hoteelka Beach Rotana.). suuq ganacsi oo ka kooban saddex dabaq (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Marina Mall (aagga Biyo-Jabiyaha agagaaraha quruxda badan ee Emirates Palace. Waxa kale oo ku jira mid ka mid ah laba suuqyada waaweyn ee Carrefour ee magaalada ku yaal.). Waxay leedahay il muusiko iyo saqafyo onkod iyo roob leh. (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Yas Mall. Waxaa laga furay 2014 agteeda Ferrari World jasiiradda Yas. Tani waa suuqa ugu weyn Abu Dhabi iyo suuqa 16-aad ee ugu weyn adduunka. Waxay ku leedahay dukaanka Lego ee ugu horreeya Imaaraadka. Waxay kuxirantahay Ferrari World. (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Al Wahda Mall (Bartamaha Magaalada (Waddooyinka 11aad iyo 4aad)). Suuq weyn oo casri ah. Dukaammadu waa heer sare, maxkamadda cuntada waa ballaaran tahay, iyo LuLu Hypermart weyn oo ku yaal qaybta hoose. (cusbooneysiiyay Sep 2015)
Khaalidiyah Mall, Mubarak bin Mohammed St, Al Khalidiyah W9 aagga, POBox 4048,, fax: + 9712 635 4499. Su–W 10:00–22:00, Th-Sa 10:00–23:00. Khaalidiya Mall waa yar tahay laakiin waa meel fiican oo la booqdo. Dukaammada dharka ee 'droll fashion' ayaa laga yaabaa inay ku qabtaan dhowr ilbiriqsi, laakiin markaa la'aanta muuqata ee waxyaabo la sameeyo ayaa bilaabeysa, si kastaba ha noqotee maxkamadda cuntada ayaa caan ah, oo ay weheliyaan New York Fries, Chili iyo Dunkin 'Donuts + Baskin Robbins. Jaranjarooyinka hoose waxaa ku yaal Krispy Kreme iyo Starbucks oo baad ah, iyo wax umuuqda inay yihiin maqaayada Hindida / Carabta ee cunnada laga cunteeyo, oo u muuqata mid wanaagsan laakiin u muuqata mid aan la jeclayn. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Shams Boutik (Jasiiradda Reem, oo ku xiran Sun iyo Sky Towers). Su-Th 10: 00–22: 00, F Sa 10: 00–24: 00. Suuq soo kordhaya oo laga dhisay agagaarka bulshada Jasiiradda Reem. Waxay ka kooban tahay tiro sii kordheysa oo dukaamo wanaagsan ah, oo ay ku jiraan supermarket, seddex makhaayad, maqaayado cunnooyinka degdega ah lagu cuno oo ku yaal dabaqa koowaad, maqaaxi laga cunteeyo, aag carruurtu ku ciyaarto, goob musbaar lagu qurxiyo, buugaagta lagu iibiyo iyo waxyaabo kale oo badan. In kasta oo ay taasi jirto, waxaa la dhigaa aag aan badanaa mashquul ahayn, oo aan caan ku ahayn. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mall - Xarunta Ganacsiga Adduunka Abu Dhabi & WTC Souk, Khalifa bin Zayed the first St cross Sheik Rachid bin Saeed St, Al Danah (oo ku taal cagaha Burj Mohammed bin Rahid tower),. Sa – W 10: 00–22: 00, Th F 10: 00–23: 00. Naqshadeynta wanaagsan ee Mall iyo Souk. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waxa kale oo jira dukaamo yaryar oo badan oo madax bannaan oo ku wareegsan magaalada. Dabaqa hoose ee hal dhisme, qofku wuxuu ka iibsan karaa shukulaatooyin qurxoon, qaybo kombuyuutar, waxyaabo qadiim ah iyo dhar. Way ka fiican tahay inaad ka soo iibsato waxyaabaha sida roogaga, farshaxanka, dahabka qurxinta iyo waxyaalaha qadiimiga ah goobaha madaxabannaan ama kuwa u eg soukooyinka marka loo eego suuqyada, maxaa yeelay qiimaha ayaa ka sii hooseeya oo dukaanleydu ay aad u jecel yihiin inay jabsadaan.
Gorgortanku waa qayb weyn oo ka adeegashada Emirates, laakiin taxaddar yeelo. Ha ku gorgortamin Marks iyo Spencer ama Hang Ten. Ku keydi xirfadahaaga qiimo dhimista dukaamada madaxbannaan ee ka shaqeeya waxyaalaha qadiimiga ah iyo wixii la mid ah.
Wax ka iibsiga meelaha badankood waa laga xumaadaa, maadaama kaaliyayaashu ay kugula socon doonaan adiga hareeraha dukaanka. Tan waxaa qayb ahaan sabab u ah fikradooda ah waxa ka dhasha adeeg wanaagsan, iyo qayb ahaan sababtoo ah waxaa jira dhibaato dukaan-qaadis ah. Intooda badani ma noqon doonaan kuwa soo dhex gala, laakiin shaqaalaha qaarkood waxay noqon karaan kuwo aad u riixa oo si aad ah u sababa. Dhoola caddee oo iyaga u mahadnaq had iyo jeer, oo waxay u badan tahay in wax yar lagaa tago.
Dukaamada roogga - ama meel kasta oo lagu iibiyo cajaladaha, waxyaabaha qadiimiga ah ee Hindida, iyo wixii la mid ah ma dareemayaan cadaadis aad u badan inay iibsadaan, hana ka nixin haddii ay bilaabaan inay furaan roog qurux badan ka dib roog qurux badan oo cagahaaga ah. Adigu waajib kuguma aha inaad iibsato, iyadoo aan loo eegin inta waqti ee ay kula joogaan, si kastaba ha ahaatee cadaadisku wuxuu noqon doonaa mid aad u deggan, oo dadka wax iibsanaya waxay u baahan karaan inay ku safraan xirmooyin si ay ugu raaxaystaan ​​aawadood.
Dukaamada raashinka sida Spinney's, Carrefour iyo Abu Coobi Cooperative Society waa qaali mana badanaaba waxaa yaala alaabada reer galbeedka. Baadh dhammaan waxyaabaha ka hor intaadan iibsan. Soo-booqdayaasha doonaya inay soo iibsadaan alaabada doofaarka waxay u badan tahay inay galaan qol gooni ah si ay u sameeyaan, maadaama aysan jirin wax muwaadiniin ah oo loo ogol yahay qeybahan dukaamada raashinka.
Sicirada Abu Dhabi waxay u muuqdaan kuwo aad u tartamaya. Bishii Janaayo 2018, Imaaraadku waxay soo bandhigeen Canshuur Dheeraad ah oo ah 5% alaabooyinka badankood marka laga reebo waxyaabaha aasaasiga ah ee cuntada.
Xilliga dhimista guud - dhammaadka sannadka iyo sannadka dhexe. Waqtiyadan ayaa ah waqtiga aad ka heli karto alaab summad leh oo qiimo aad u hooseeya leh, laga yaabee inay kaydkii xilli ciyaareedkii hore.
Makhaayadaha Abu Dhabi
In kasta oo Abu Dhabi ay martigeliso noocyo kala duwan oo hudheello iyo qowmiyado isugu jira, haddana ma jiro noocyo badan marka laga hadlayo cunnada. Cuntada Hindidu waa mid jaban, oo waxaa jira makhaayado silsilado silsilado Shiine ah oo leh qiime macquul ah Makhaayadaha hudheelku badanaa waa kuwa ugu qaalisan. Magaaladu waxay hoy u tahay nooc kasta oo cunto dhakhso ah sida McDonald's iyo Hardees, laakiin waxaa jira wicitaan yar oo dadka badankood ay ka cunaan meelahaas.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan Abu Dhabi ayaa ah in meelaha ugu badan, laga bilaabo dukaamada yar yar ee falafel illaa maqaayadaha hudheellada waaweyn illaa Burger King, ay meel kasta oo magaalada ka mid ah gaarsiiyaan. Gaarsiintu waa mid deg deg ah oo la isku halleyn karo, badiyaaana kharash dheeraad ah kuma baxo. Cuntada oo dhami waa xalaal.
Khudradleyda ayaa xulashada cuntada ee magaalada ka heli doonta mid aad u qancisa. Cunnooyinka khudradda u leh khudradda iyo digirta, noocyada kala duwan ee cunnooyinka Hindida ee khudradda wanaagsan leh, iyo helitaanka diyaarinta saladhyada cusub waxay ka dhigayaan cunitaanka Abu Dhabi mid aan walwal lahayn. Hiliblayaasha adag ayaa dhib yar kala kulmi kara gudbinta baahidooda saxda ah, laakiin meelaha badankood waxay bixiyaan suxuunta vegan oo had iyo jeer waxay diyaar u yihiin inay la macaamilaan macaamiil lacag bixinaysa. Xulashada ugu wanaagsan ee loogu talagalay vegans-ka nadiifka ah waa mid ka mid ah maqaayadaha khudradda leh ee Hindida sida Evergreen, Sangeetha oo ku yaal aagga Dalxiiska Dalxiiska.
Hubi kalandarka islaamka si aad u ogaato inaad booqanayso inta lagu jiro bisha Ramadaan iyo in kale. Maaddaama Muslimiinta ay sooman yihiin inta lagu jiro saacadaha maalinta, maqaayadaha ayaa, sharci ahaan, xiran maalintii. Sidoo kale waa sharci daro in wax la cuno ama la cabbo, xitaa biyo, meel fagaare ah. Dalxiisayaasha (iyo dadka aan muslimiinta aheyn ee degan) ayaa la xiray waxaana la ganaaxay ganaax ah ku xadgudubka sharcigan. Hoteellada waaweyn guud ahaan waxay leeyihiin hal makhaayad oo furan inta lagu jiro maalinta si loogu cunteeyo kuwa aan muslimiinta ahayn. Inta lagu jiro fiidkii, si kastaba ha noqotee, waa sheeko ka duwan, sida jawiga xafladda afurka (afurinta) ayaa bilaabmaysa waxayna dadka deegaanku isugu imaanayaan raashin qaali ah, oo mahadnaq la mid ah. Ilaa iyo intaadan dhib ka qabin inaad si gaar ah u dhexjoogto, cuntooyinka fiidkii waa kuwo aad u fiican.
Laanta Saytuunka, Mafraq - Abu Dhabi,. Furan 24 saacadood oo adeegsi maalin kasta ah iyo à la carte menu Waqtiyada cunnada lagu adeegto: Quraac 06: 00-10: 30, Qado 12: 30-15: 30, Casho 19: 00-23: 00. Makhaayada Mafraq maalintii oo dhan waxay u adeegtaa saamaynta amaahda cusub ee Mediterranean-ka ee ka imanaya gobollo kala duwan, oo ay ku jiraan Faransiiska, Spain iyo Turkiga. Buugga waxaa lagu diyaariyey waxyaalaha ugu wanaagsan uguna qurxinta gudahana waa isku mid hawo iyo madadaalo.
Hunter ee B & R., Mafraq - Abu Dhabi,. Furan maalin kasta laga bilaabo 12: 00 illaa 02: 30 oo cunto la wada bixiyo. Baar casri ah oo leh darbiyo leben cagaaran ah, miisas alwaax adag ah iyo TV-yo badan oo shaashad ah oo muujinaya isboorti Ilaah cabitaannada shaqada ka dib, ama fiidkii asxaabta, Hunter's B & R wuxuu bixiyaa jawi caadi ah oo leh buuq bulsheed.
Rimal, Mafraq - Abu Dhabi,. 14: 00-01: 00. Rimal Asian fusion bar waxay u adeegtaa suxuunta bariga ee jawi dhab ah oo leh gees casri ah. Dhadhamiya dhadhanka macaan ee ka socda Kuuriya, Shiinaha iyo Japan ee marinkan dhiirrigelinta Aasiya ah, oo lagu dhammaystiray Sake iyo saxeexan is biirsaday.
Barxadda Oasis, Mafraq - Abu Dhabi (Hotelka Mafraq). Maalin kasta laga bilaabo 12: 00 illaa 21: 00 oo cunto la wada bixiyo.. Baarka dhinacan leh iyo maqaayada waxaa laga cabbaa qorraxda hoosteeda iyo xulashooyin fara badan oo fudud. Barkadda dabaasha ee barkadda ayaa bixisa nasasho. Shisha sidoo kale waa la heli karaa.
Burlington solay, Mafraq Abu Dhabi,. Qado 12: 00-15: 00 iyo casho 19: 00-24: 00. Makhaayada hudheelka lagu shiilo ee hudheelku waxay u adeegtaa hilib la dubay iyo hilib cunno badeed laga sameeyay. Ka dooro noocyo badan oo bilawga ah iyo saladhyo ay ka mid yihiin keega carsaanyo, riwaayadaha farmaajo farmaajo iyo qaabka loo yaqaan 'Louisiana fish' gumbo. Waxay ku leedahay makhaayad al fresco ah berriga iyo baarka aperitif.
Suuqa kalluunka duugga ah. Mid ka mid ah meelaha harsan ee saxda ah ee magaalada, halkaas oo aad ka heli karto kalluun cusub oo lagu kariyey xulashadaada maraqa iyo wehelinta.
Qaar ka mid ah kuwa ugu raqiisan, laakiin aan daruuri ahayn ugu fiican, cuntada magaalada waxaa laga heli karaa maqaaxiyo badan oo Hindi ah. Qaybaha had iyo jeer waa deeqsi, qiimo hooseeya, iyo tayo aad u fiican. Cunto bariis ah, kaluunka kaluunka, kaluunka kaluunka (dhal), maraq basbaas (rasam), saxan dhinaca qudaarta ah iyo malaha kalluun yar oo shiilan, oo loogu adeegsaday saxaarad bir weyn leh (thali) oo leh fijaano bir ah oo yar oo loogu talagalay wehelinta, waxay u socon karaan ugu yaraan 5 dirham.
Qasriga Carabta (gadaashiisa Baynunah Tower),. Qurxinta waa mid aasaasi ah oo cuntada, in kasta oo raqiis ah oo la buuxinayo, waa wax la ilaawi karo, laakiin shiishada halkan ku taal ayaa aad u fiican. Tuubbo tuubbo, dalbo cabitaankooda "liinta leh reexaanta" aadna u fiirso daaraha dhaadheer. 50 dirham.
Makhaayada Khudradlayda Anand, Wadada Hamdan (gadaasha Dunia Finance Building iyo Al Mansouri Plaza),. Kani waa makhaayad nadiif ah oo Gujarati ah (Waqooyiga Hindiya). Baahida loo qabo Puri Bhaji, rootiga la shiilay ee qoto dheer iyo baradhada iyo saxanka digirta, waa wax aad u weyn oo waa inaad sugto markiisa laakiin waa u qalantaa. Waxaa jira qayb gaar ah oo loogu talagalay dumarka iyo qoysaska. Qadada jimcaha oo leh macmacaan iyo inta Puri ee aad rabto kaliya 12 dirham. Mararka qaarkood waa inaad sugto 10 daqiiqo si aad u hesho roti. Qofkiiba 10 dirham, cun intaad karto.
Makhaayada Nalas Aappakadai (Ka dambeeya dhismaha NDC ee Salam St). Takhasus u leh Aappam & cunnooyinka ugu wanaagsan Koonfurta Hindiya ee laga helo cunnada Chettinad, Shiinaha & Tandoor
Makhaayada Cettinad (Ka dambeeya shineemo / Filimmo qaran, oo udhaxeysa Hamdan iyo Electra St, oo ku xigta Abudhabi Floor Mill),. Cunto sax ah Chettinad ayaa lagu heli karaa qiimo macquul ah. Sidoo kale u adeegida Waqooyiga Hindiya, Shiinaha, Tandoor iyo cuntada Mughalai. Cunnooyinka khudradda iyo kuwa aan khudradda lahayn labadaba waa la heli karaa. Laanta Makhaayada Cettinad waxay ku xigtaa saldhiga tagaasida ee laydhka taraafikada, dhinaca danbe ee dhismaha xayeysiinta ee Brightway, + 971 24454331, +971 2 4454332
Al Safadi (Wadada Sheik Zayed Wadada Khaalidiya). Dhisme duug ah oo ka mid ah qaybaha qadiimiga ah ee socodka badan ee Abu Dhabi. Sanduuqa Shawarma ee midkiiba 5 dirham. Saxan kasta oo weyn wuxuu la yimaadaa saxan weyn oo cagaar ah, pickles, basbaas iyo rootiga Lubnaan. 50 dirham.
Huteelada ku yaal Abu Dhabi waxay ahaan jireen kala bar qiimaha kuwa ku yaal Dubai laakiin mar dambe ma ahan, iyadoo hoteelo badan ay habeenkii ka sarreyn jireen 500 dirham. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood si fiican ayaa loo ilaaliyaa oo martigeliya makhaayadaha fasalka koowaad, barkadaha iyo xarumaha kale ee hudheelka sare.
Grand Continental Flamingo (agagaarka Hamdan St iyo Khalifa Bin Zayed St.),. Kani waa hudheelka ay tagaasidu heli karin. Arium-2-dabaq ah, goob deggan, qolal leh bidet, qubeys iyo qubeys aad u badan iyo TV-yada shaashadda ballaaran ayaa dhammaantood gacan ka geysta joogitaanka saaxiibtinimo. Kaliya cabirka nalka iyo rooga xad dhaafka ah ee qolka ayaa hoos u dhigaya. Tuwaallada qubeyska sidoo kale xoogaa wey yar yihiin. 200 dirham.
Hoteelka Novotel Center Abu Dhabi (Novotel) (Wadada Hamdan Street & Airport),. Qolal ku filan laakiin quraac aan ku filnayn oo qaali ah oo ku taal daarta taallo. Qaabilaaddu waa mid ciriiri ah oo aan lahayn qaab. Wiishka (wiishashka) aad ayuu gaabis u yahay. Adiga ayaa iska bixinaya adeegsiga internetka. Kaliya shaqaalaha faraxsan iyo, haddii ay adiga kugu habboon yihiin, goobta dhexe ayaa furan doonta goobta. Makhaayada Shiinaha ayaa la sheegay inay sidoo kale wanaagsan tahay.
Jasiiradda Park Inn Abu Dhabi Yas (Golf Plaza, Jasiiradda Yas),. Nadiifi qolalka, adeegga wanaagsan iyo shaqaalaha saaxiibtinimada leh. Makhaayada ayaa ah xulasho weyn oo casho ah. 550 dirham.
Kordhin, Dusha sare ee Xarunta Bandhigga Qaranka. Hoteel casri ah oo leh midabyo mugdi ah oo qabow, shaqaalihi miiska hudheelada soo jiidan jiray ee quruxda badan, qolal yar yar (sariiraha waa kuwo raaxo leh), makhaayad wanaagsan iyo barxad lobb, qol jiif ah oo bannaanka ka ah saqafka, iyo diskoof nus madhan ah oo ku xiga. Way fiicantahay haddii uu jiro heshiis, laakiin waa wax lagu socon karo wax kale. Baabuur ama taksi ayaa loo baahan yahay si meel uun looga helo. Waxaa laga yaabaa in marka hoyga dhow / horumarka ganacsigu diyaar noqdo dhawr sano gudahood, waxaa laga yaabaa in la sii jeclaado. 4-xiddig leh waxyaabo yar (waxaad boorsooyinkaaga u keentaa qolka), laakiin weli waxaa jira dareen qeexan oo qaab ah. US $ 90-200.
Crowne plaza, Wadada Hamdan,. Is xaadiri: 14: 00, baadhid: 12: 00. Huteel raaxo leh lacag yar oo ka yar Hilton ama labadaba Les Meridiens. Makhaayadaha Aasiya iyo Talyaani ee ugufiican magaalada waxay kuyaalaan heerka dhulka. Adeeggu waxyar buu noqon karaa, sariirta waa raaxo. Waxaa jira dabaq sare oo saqafka sare ah oo had iyo jeer u muuqda mid madhan. Waxaa laga yaabaa in ka badan hudheel 4½-xiddig leh, oo aan ahayn 5-xiddig. Waxaad mararka qaarkood heli kartaa “baabuur” halkii aad ka heli lahayd taksi si aad meelo u hesho, wax aan ka badnayn taksiga. US $ 100-400.
Beach Rotana Hotel iyo Towers (Xeebta Rotana), Aagga Naadiga Dalxiiska,. Marmar meel kasta ayaa soo koobaysa. Qolalka naadigu waa u qalmaan haddii aad bixinayso qiimayaal buuxa oo loogu talagalay qolalka caadiga ah ee hudheelka weyn ee waayeelka ah. Wax badan kama weyna laakiin adeegsiga qolka fadhiga naadiga ayaa qiimo leh haddii aad hudheel aad u badan gasho oo qabanqaabada TV-gu ay ka casrisan yihiin, aragtidu way ballaadhan tahay Waxay hadda u muuqataa dhismaha culus ee jasiiradaha cusub ee macmalka ah ee ku teedsan wabiga.
Bariga Mangroves Hotel & Spa (Waxay ku taalaa meel dhererkeedu yahay 1.2 kilomitir oo ah degmada Abu Dhabi ee Bariga Mangroves),. Baadhid: Dib-u-eegid dambe illaa 18:00 (iyadoo ku xiran helitaanka). 222 qol iyo qolal, barkad dabaal aan xad lahayn, qalab kulan iyo munaasabado, tas-hiilaad aroos. Qiimaha US $ 136. (la cusbooneysiiyay Jul 2020)
Emirates Palace, Bariga Corniche,. Waxaa lagu dhisay qiime lagu qiyaasay US $ 3 bilyan, kani wuxuu ahaa akoonno badan hudheelka ugu qaalisan adduunka ee la dhiso, oo leh oodyo dahab iyo marmar ah oo dahaadhaya meel kasta oo la heli karo. Qiyaasta wax waliba waa gargantuan - waxaad u baahan tahay jihooyin kaliya si aad uga raadiso albaabka albaabka ilaa hoolka. Huteelku wuxuu dareemayaa inuu si toos ah uga baxayo Las Vegas, oo laga jaray mashiinnada ciyaarta. Si aad u booqato Qasriga, waxaad u baahan doontaa boos celin makhaayad ama baarka hudheelka. Siciraduhu waxay ka bilowdaan 970 dirham.
Hilton Abu Dhabi, Bariga Corniche,. Mid ka mid ah hoteelada waayeelka ah ee ku yaal Abu Dhabi, laakiin ku jira qaab wanaagsan oo dhowaan la dayactiray. Weyn Hiltonia xeebta / barkadda / isboortiga oo ku yaal hareeraha waddada (bilaash loogu talagalay martida), jimicsi yar oo ku yaal hudheelka laftiisa Qolalka "Dheeraadka ah" waxay wajahayaan badda laakiin haddii kale waxay la mid yihiin kuwa caadiga ah. Waxay ku taal meel ka fog bartamaha magaalada, taas oo labadaba wanaagsan (aan lahayn sawax dhisme) iyo mid xun (run ahaantii ma jiraan wax masaafad u jirta). Waxaa jira adeegyo duullimaad oo ka socda Marina Mall iyo bartamaha magaalada oo la bixiyo. US $ 150.
Iskuxirka Abu Dhabi. Mid ka mid ah hoteelada sharafta mudada dheer leh. Heshiisyada Internetka ee qaaliga ah laakiin marmar ah ee ku yaal websaytyada ballansashada madaxbannaan ee hudheelka ayaa u qalma haddii aad diyaar u tahay inaad hore uga bixiso internetka. Hoolka soo dhaweynta waa mid aad u weyn oo dhowaan la dayactiray. Qololku waxay u muuqdaan wax yar 1980 -kii iyagoo qurxinaya (muraayado aad u badan) laakiin sariiradu waa raaxo aragtooduna waa fiican tahay. Makhaayadaha jimicsiga iyo ganaaxa (laakiin qaaliga ah). Dadka ku nool Abu Dhabi waxay ku badan yihiin hoolka hoteelka biyaano iyo maqaayadda Brazil. Waxay xoogaa ka fog tahay Bartamaha magaalada laakiin dejinta iyo adeegyada ayaa mudan. US $ 150-400.
Le Meridien Abu Dhabi, Aagga Naadiga Dalxiiska,. U sheeg tagsiilaha "Lee Meridien" mana ku qaldin doono Royal Meridien. Amaanada ugufiican waa Tuulada Meridien, oo ah beer bannaanka ah oo ay ka buuxaan makhaayado iyo baararka, iyo habeennada Khamiista inta lagu jiro bilaha qaboobaha, hagitaan macno ahaan kumanaan ajaanib ah. Loogu talagalay in lagu beddelo buundada degmada maaliyadeed ee Jasiiradda Suwwah, markaa ku raaxayso intaad karayso.
Le Royal Meridien, Wadada Sheekh Khalifa,. Muuqaallo qurux badan oo ku saabsan gacanka iyo Corniche, sariiro raaxo leh, makhaayado badan iyo baarar (aad u qiimo badan). Adeeggu aad buu u wanaagsan yahay, laakiin waxyaalaha sida keenista saxan miro soo dhaweyn ah qolkaaga (oo hore ugu dhici jiray hudheelada 5 xiddigood) ayaa lagu daray hadda. Makhaayada meertada ah ee ugu sarreysa, iyo cawee yar oo lagu caweeyo oo ku yaal dabaqa 4aad ee macaamilada dhinaca mugdiga ah. Mararka qaar waxaad ka heli kartaa heshiisyo wanaagsan oo dhab ah oo ku saabsan bogagga ballansashada internetka (oo u hooseeya US $ 139 / habeenkii), laakiin guud ahaan waxay filayaan inay bixiyaan wax ka badan US $ 200 / habeen xitaa xilliga xasilloonida, iyo in ka badan US $ 500 markay leeyihiin bandhig qandaraaslayaal difaaca iyo wixii la mid ah. Internetku waa US $ 24 / maalintii taas oo ah wax lagu qoslo, si kastaba ha noqotee haddii aad ku isticmaashid shabakadda bilaa-waayirka ah ee ku dhex taal daarta, wax lacag ah lagama qaadayo. Waxay ku hayaan US $ 135 maalintiiba kaarkaaga amaahda haddii aad rabto inaad cunto ama waxyaabaha kale ee raaxaysiga ah u dhigto qarashka qolkaaga, markaa hubi inaad haysato khadad amaah wanaagsan oo aad heli karto haddii aad halkan joogayso in ka badan dhowr maalmood. US $ 150-400 / habeenkii.
Radisson Blu Abu Dhabi, Yas Plaza, Jasiiradda Yas,. Dulmaraya koorsada golf iyo F1 Circuit. Waxay leedahay 397 qol oo ka kooban qolal iyo dabaqado ganacsi. Maalin dhan makhaayada laga cunteeyo, makhaayada talyaaniga, maqaayada Beershiya, barxada barxada, iyo baarka barkada.
Hoteelka Yas (Jasiiradda Jasiiradda),. Badh dhig dhulka badhkiisna biyaha, oo fiirinaya marinka, oo fadhiiso Yas Marina Circuit, oo ciyaareysa martigelinta sanadlaha ah ee Formula One Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, hudheelkani waa mid gaar ah. Shabakadda bannaanka waxaa lagu arki karaa maylal hareeraheeda ah waxayna la mid tahay tuurista shabaagga kalluumeysiga maxalliga ah. Afar iyo toban makhaayado iyo qolal.
Safaaradaha & Qunsuliyadaha Abu Dhabi
Ahaanshaha caasimadda qaranka, Abu Dhabi waxay martigelisaa safaarado aad u tiro badan. Intooda badan waxay kuxiranyihiin Degmooyinka Safaaradaha (Al Safarat) koonfurta garoonka diyaaradaha ee Al Bateen iyo Agagaarka Al Maarid, galbeedka Rabdan St iyo koonfurta Shk Rashid bin Saeed Road (Wadada # 18); iyo Xarunta Dhexe ee ku xigta koonfurta Al Karamah St ee ku hareeraysan Xarunta Bandhigga. Waxaa jira kuwa kale oo woqooyi-galbeed ka xiga Al Danah, Al Markaziyah iyo qaybo kale oo magaalada ah sidoo kale. Haddii ay u dhigantaa boostada / boostada u isticmaal cinwaankooda sanduuqa 'PO' maadaama boosta loo geeyo oo keliya Sanduuqa PO oo aan lahayn lambarro boosto. Haddii aad u direyso cinwaan waddo oo ay la socdaan DHL, FedEx, UPS ama warqad kale oo gaar loo leeyahay hubi inaad ku darto lambarka taleefanka qaataha si darawalka geynta uu u soo waco tilmaamaha ama caddeynta cinwaanka. Qaar ka mid ah ama dalalka badankood waxay dayactiraan qunsuliyad dheeri ah oo ku taal Dubai waxayna kaliya ka bixiyaan adeegyo qunsuliyadeed qunsuliyaddooda Dubai ama labada gooboodba. Hubi xiriiriyeyaasha websaydhka ama wac ka hor intaadan tegin ama dirin wax xiriir ah:
Australia, Heerka 8aad, Al Muhairy Center, Zayed the first (7aad) Street,, fax: + 971 2 401 7501.
Bahrain, Aagga Safaradaha, Basin W 59-02 wax badan # 13; PO Box 3367,. Su-Th 08: 30-14: 30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bangladesh, Villa No. 21, Shirqool lambar W-14/01, Aagga Al Rowdha; PO Box 2504,, fax: + 971 2 446 4733. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Canada, Abu Dhabi Mall, Towers ee Xarunta Ganacsiga ee West Tower, Dabaqyada 9aad-10aad; PO Box 6970, Abu Dhabi,, fax: + 971 2 694 0399. Su-Th 08:00-12:00 and 13:00-15:00.
Shiinaha, Shirqoolka No. 26, Qeybta No. W-22; PO Box 2741 (Al khaleej Al Arabi St. (NO30) guud ahaan No 17. U dhow bulshada iskaashatada khalidiya.),, fax: + 971 2 443 6835. Su – Th 08: 30-14: 00.
Masar, Aagga Diblomaasiyadeed, Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum Street (Wadada Madaarka Old),, fax: + 971 2 444 9878. 09: 00 - 16: 00.
Itoobiya, Villa 119, Wadada No. 32, Wadada Al Bateen, Al Bateen - Abu Dhabi,. Safaaraddu waxay ku taal Al Batten oo u dhow isgoyska wadada Al Batten (no.6) iyo Al Falah (nr. 9) Street. Wadada wareega ah qaado albaabka afraad waxaanna 100 mitir ku jirnaa Vila 119. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Finland, Al Masaood Tower, dabaqa 12aad, xafiiska 1202 Hamdan Street Abu Dhabi,, fax: + 971-2-632 5063. Su-Th 08: 00-15: 45.
France, Etihad Tower, Xafiiska Tower n ° 3, Dabaqa 22aad, Corniche West, PO Box 4014,. Su – Th 08: 45–12: 00, MW 14: 00–15: 45. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Germany, Abu Dhabi Mall, Daaraha Xarunta Ganacsiga West Tower, Dabaqa 14aad, Abu Dhabi,, fax: + 971 2 644 6942. Su-Th 08: 00-16: 00 (Waxaa leh kaliya appt).
Greece, 31 str, Al Muroor, (PO Box 5483, Abu Dhabi),, fax: + 971 2 449 2455.
Hindiya, Shirqoolka 10aad, Qeybta W-59/02, Aagga Diblomaasiyadda; PO Box 4090 (Qeybta Sheik Rashid bin Saeed Streeet (Hore waxaa loo yiqiin Wadada Madaarka), oo u dhaw Pepsicola,),, fax: + 971 2 444 4685. Su-Th 09: 00-12: 30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Indonesia, Aaga 2, Qeybta 79, Villa No. 819, Sultan Bin Zayed Street (Str.32), Aagga Al Bateen; PO Box 7256, Abu Dhabi,, fax: + 971 2 445-5453.
Iiraan, Aagga Diblomaasiyadda, oo ku xigta Xarunta Carwada Caalamiga ee Abu Dhabi; PO Box 4080,, fax: + 971 2 444 8714. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ciraaq, Aagga Diblomaasiyadda, Wadada AirPort ، 33rd Al Karamah Street; PO Box 6389,, fax: + 971 2 441 8155. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Japan, PO Box 2430, Abu Dhabi,, fax: + 971 2 443 4219. Su-Th 08: 00-17: 00; Qaybta Fiisaha ayaa xirmay 13:30; Weydiimaha Taleefanka illaa 15:30. Goobta qunsuliyada ee dhabta ah: Dabaqa 28aad, Dhismaha Xarunta Ganacsiga Dunida ee Dubai, Dubai;
Urdun, Rashid Bin Saeed Al Maktoum Street, Aagga Diblomaasiyadda, Abu Dhabi,, fax: + 971 2 444 9157. M-Th 08: 30-15: 00 & Su 08: 30-12: 00
Republic of Korea, Wadada Madaarka 33aad, Degmada Safaaradda; PO Box 3270, Abu Dhabi (Agagaarka Xerada Al Nahyan, oo ka soo horjeedka tagaasida Abu Dhabi),, fax: + 971 2 641-6380.
Netherlands, Tower Tower - Bldg lambar. 11, dabaqa 14aad Al Khaleej Al Arabi Street (aagga ADNEC), Xarunta Dhexe; PO Box 46560,. Su-Th 08: 00-15: 30 by appt kaliya; M & W 09: 00-12: 00 adeegyada qunsuliyadaha oo kaliya appt. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
New Zealand, Niv 25 2503, Suite 62292, Xarunta Caalamiga ah, Xarunta Dhexe; PO Box XNUMX,, fax: + 971 2 496-3300. M-Th 08: 30-16: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Cumaan, Aagga Al Mushraf, Wadada Al-Saada 19,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Pakistan, Shirqoolka No. 02, Qeybta W-59, Degmada Safaaradda; PO Box 846,, fax: + 971 4 397 1975. Adeegyada qunsuliyadaha ayaa ku yaal Dubai halka loo yaqaan Umm Hurair One, Khaalid Bin Waliid Wadada, Bur Dubai, (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Filibiin, W-48, Wadada No. 8, Qeybta 2-23, Shirqoolka 51aad, Al Qubaisat, Abu Dhabi; PO Box 3215,, fax: + 971 2 639 0002. Su-Th 08: 00-17: 00; Xidh 13:00 inta lagu jiro bisha Ramadaan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Russian Federation, Wadada Khalifa, Bariga Shirqoollada 65/67 ، Al Markaziyah; PO Box 8211,. (Adeegyada Qunsuliyadaha) Su iyo Thur 08: 00-14: 00; Talaado 17: 00-20: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Saudi Arabia, Wadada Al Karama, Aagga Safaaradaha,, fax: + 971 2 444 8491. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Koonfur Afrika, Wadada Garoonka Diyaaradaha & Wadada 25aad, Villa No A029, Aagga Al Mushref,. Su-Thu 08: 30-12: 30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Switzerland, Wadada Al Khaleej Al Arabi, Centro Capital Center Dhismaha, dabaqa 17aad; PO Box 95199,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Turkey, Villa No: 1, W59-02; 1, Aagga Safaaradda; PO Box 3204,. Su-Th 08: 30-14: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Boqortooyada Ingiriiska, Khalid bin Al Waleed St (Wadada 22), Deegaanka Corniche; PO Box 248,. Su-Th 07: 30-14: 30. Xarunta codsiga fiisaha ee Shining Tower, Heerka 25 King Khalid Bin Abdel Aziz 26th Street, oo ku dhegan Khalidyah Mall; PO Box 30023 (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
United States, PO Box 4009, Abu Dhabi,.
Xagee laga aadayaa Abu Dhabi
Dubai (saacad iyo bar wadid wadada weyn). (la cusbooneysiiyay May 2021)
Al Ain (90 daqiiqo uun bay inaga xigtaa). Imaaradda Imaaraatka ee ugu weyn. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Liwa Oasis (laba saacadood ka socda magaalada). Cidlo yaab leh oo cidla ah. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Qiish Island. Jasiiradda dalxiiska ee Iiraan (la cusbooneysiiyay May 2021)
Guryaha Al Manzel Hotel Abu Dhabi
Hoteelka Sare ee Abu Dhabi
Centro Capital Center By Rotana Hotel Abu Dhabi
Xilliyada Magaalada Al Hamra Hotel Abu Dhabi
Hoteelka Cristal Abu Dhabi
Hoteelka Crowne Plaza Abu Dhabi
Hoteelka Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island
Dalxiis Dalxiis Jebel Dhanna Abu Dhabi
Xeebaha Jasiiradaha Dalxiiska & Dalxiiska 'Anantara Abu Dhabi'
Hotel Dhafra Beach Abu Dhabi
Bariga Mangroves Hotel & Spa Waxaa qoray Anantara Abu Dhabi
Hoteelka Emirates Palace Abu Dhabi
Hotel Fairmont Bab Al Bahr Hotel Abu Dhabi
Tulip Tulip Al Jazira Hotel & Dalxiis Abu Dhabi
Suuliyadaha Tulip Dalma Dahab Abu Dhabi
Hoteelka Hilton Abu Dhabi
Hotel Park Arjaan Waxaa qoray Rotana Abu Dhabi
Hoteelka Sofitel Abu Dhabi Corniche
Howard Johnson Hotel - Dublamaasi Abu Dhabi
Hoteelka Abu-Dhabi ee Qaaradaha
Jumeirah At Etihad Towers Guryaha Abu Dhabi
Qasriga Khaalidiya Rayhaan By Rotana Abu Dhabi
Hoteelka Kingsgate Abu Dhabi
Huteelka Mercure Abu Dhabi Center
Hoteelka Novotel Abu Dhabi Gate
Hal ilaa Hal Hotel Tuulada Abu Dhabi
Park Inn Waxaa qoray Radisson Abu Dhabi Yas Island Hotel
Xarunta Premier Inn Abu Dhabi
Dalxiis Qasr Al Sarab oo loo Dalxiis tago Anantara
Sheraton Khaalidiya Hotel Abu Dhabi
Qolalka Sitbridge Abu Dhabi - Yas Island Hotel
Suugaanta 'Eclipse Boutique Suites' ee Abu Dhabi
Hotelka weyn ee Ritz-Carlton Abu Dhabi
Dalxiiska Jasiiradda St. Regis Saadiyat ee Abu Dhabi
Hotelka weyn ee Qaaradaha Flamingo Abu Dhabi
Ganacsatada Hotel Qaryat Al Beri Abu Dhabi
Guryaha Hoteelka Vision Abu Dhabi
eHalal Safarka Mart > Imaaraatka Carabta Xalaal Safar > Tilmaamaha Safarka ee Abu Dhabi Xalaal